केके दान गर्दा खुशी हुन्छिन् महालक्ष्मी
Mon, Jul 13, 2020 at 11:55pm
बिहिवार, ७ कार्तिक २०७६,	आहाखबर	7.01K
काठमाडौँ, ७ कात्तिक
लक्ष्मी पूजाको अघिल्लो दिन धनतेरस पर्वमा नयाँ सामानहरु किन्ने चलन रहिआएको छ । यो कार्य लक्ष्मी पूजाको दिनसम्म राम्रो मानिन्छ । यस दिन सुन, चाँदीका सिक्का, भाँडाकुँडा, लक्ष्मी तथा गण्ेशको मूर्ति खरिद गर्ने गरिन्छ ।
यो दिन केही विशेष कुराको दान गर्नु शुभ मानिन्छ । यस्ता चीज दान गरे लक्ष्मीले सधै घरमा बास गर्ने मान्यता रहिआएको छ ।
पहेंला कपडा दान
ज्योतिष शास्त्र अनुसार पहेंलो रंगको सम्बन्ध बृहस्पति ग्रहसँग रहेको मान्यता छ । धनतेरसका दिन पहेंलो कपडा दान गर्नु राम्रो मानिन्छ । यस दिन कुनै पनि मानिसलाई पहेंलो कपडा दान गरेमा पुण्य मिल्छ । यस दिन यस्तो कपडा दान गर्नु महादान गरे सरह मान्यता रही आएको छ ।
यो दिन गरिने अन्न दानको विशेष महत्व छ । यस दिन आफ्नो घरमा गरीब, भोका व्यक्तिको सम्मानका साथ खाना खुवाउनाले माता लक्ष्मीको कृपा हुनेछ । खाना खुवाइसकेपछि दक्षिण दिएर विदा गरेमा लक्ष्मी खुशी हुनेछिन् ।
मानिन्छ कि माता लक्ष्मीको झाडु प्रिय वस्तु हो । त्यसैले यस दिन झाडू तथा कुचो किनेर पूजा गर्नाले लक्ष्मी खुशी हुनेछिन् । आफू आर्थिक अवस्थामा कमजोर भए झाडूको दान गर्नाले आर्थिक तनाव कम हुँदै जान्छ । झाडू दान लिने व्यक्तिको घरमा पनि महालक्ष्मीको आगमन हुन्छ ।
यस दिन फलाम दान गर्नाले भाग्य बढ्ने दुर्भाग्य हट्ने गर्छ । यसो गर्नाले मानिसमा महालक्ष्मीको आशिर्वाद मिल्नेछ र जीवनमा राम्रो फल प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ ।
यस दिन मिठाई तथा नरिवल गरीब तथा भोका व्यक्तिलाई दान गरेमा धन धान्यले भरिपूर्ण हुनेछ । साथै जीवनमा कहिल्यै आर्थिक अभाव हुँदैन ।
खण्डग्रास सूर्यग्रहण : यस्तो छ धार्मिक र वैज्ञानिक मत
कुन ठाँउमा कति बजे सुरु हुदैछ खण्डग्रास सूर्यग्रहण ?
बिहीबार खण्डग्रास सूर्य ग्रहण, ग्रहण झण्डै तीन घण्टा रहने
वास्तुशास्त्र : घरमा यस्ता चिजहरु राखे शुभ
तपाईंको दाँत खप्टिएको त छैन, यस्ता विशेषता भए भइन्छ भाग्यमानी !
नेवार समुदायमा आज म्हः (आत्म) पूजा मनाइँदै
भाइटीका लगाई दिंदै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् नभई नहुने सामग्री
निधारमा टिका लगाउनुको फाइदा यस्तो
हिन्दु धर्मको २१ नरक : कुन गल्तीमा कस्तो सजाय भोग्नुपर्छ ?
पैतालाको रेखाबाटै थाहा पाउनुहोस् आफ्नो भाग्य
शरीरका अंग फरफराउदा थाहा हुन्छ भविष्यमा के हुँदैछ
यस कारण बिहिबार कसैलाई पनि पैसा सापटी नदिनुस्
सात बार मध्ये यी बार जन्मेका व्यक्ति हुन्छन् धेरै भाग्यमानी
आईतवार महाअष्टमी पर्व : महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा !
नवरात्रिका बेला भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता काम
ब्रह्माण्डका ४ युग ! कति बाँकी छ कलियुगको आयु ? त्यसपछि के होला ?
नवरात्रमा दुर्गा भगवतीलाई प्रसन्न पार्न यस्तो रंगको वस्त्र धारण गर्नुहोस्
यस्ता गुणले भरिपूर्ण हुन्छन् असोजमा जन्मेका व्यक्ति
वास्तु टिप्स : आर्थिक संकट हटाउन घरमा राख्नुहोस् यी ५ चीज
हातमा 'X' चिन्ह हुनेहरुको भविष्य यस्तो
वास्तु शास्त्र : यी दिशामा कुचो राखे घरमा सधैं कलह हुन्छ
सोह्र श्राद्ध : श्राद्ध नगरे के हुन्छ ? यस्तो छ शास्त्रीय मान्यता
तयार भयाे योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक
अध्यात्म र प्रकृति : जीवन जिउने अर्को काइदा